2009 BHUKU REVANHU VANYANYA KUSARUDZA Bvunzo (KPSS) MIBVUNZO YENYIKA YENYAYA MIBVUNZO NEMHINDURO
2009 PUBLIC STAFF SELECTION EXAM (KPSS) RURIMBO RWEZVIMWE GERMAN EXAM MIBVUNZO NEMAGWARO
Imwe pdf file ine chinyorwa, chiGermany, mibvunzo yeFrance nemhinduro.
Unogona kuwana mimwe mitauro yekuongorora mhinduro uye mhinduro dzeKPSS kuongorora mu 2009 mune .rar archive.
Mibvunzo nemhinduro dziri mune imwe faira.
Pasi pemibvunzo iyi mhinduro
FUNGA PANO KUTI UCHIDZIDZE 2009 KPSS YENYAYA DZEMIBVUNZO MIBVUNZO NEMAPINDURO
Vadiwa vaverengi, ikozvino sekurudziro
Nhamba yeGERMAN Iwe unogona kuverenga chidzidzo chedu.
Shingairira Sibel zvakananga anodaro 11 apfuura
Unogona kunditumira e-mail here? (Ndinoda mibvunzo yekare yekuongorora)
rudo rwangu anodaro 11 apfuura
Ndiri kutora B 1 miedzo mazuva ano. Ndakanga ndiri muGermany kwemakore mana uye ndave ndichienda kune zvidzidzo zvakabatanidzwa. Ndinoda kutora nzvimbo iyi
selver anodaro 10 apfuura
chiGerman hachisi mutauro wakaoma, asi ndinoda musoro kuti ndipe mutauro wandisina kuenda kuGermany asi ini ndichauya gore rakatevera isallahh AMİN :)))